Engaging Books | News Literature
Isu takajaira kune chimwe chinhu chinotikochekera, chinofanira kunge chine hukama nenhevedzano, bhaisikopo rakateedzana, nezvimwe. Asi isu hatifunge nezvemabhuku anokochekera kana muchokwadi aripo, dzimwe nguva kunyange kusvika pamwero mukuru kudarika akatevedzana kana mafirimu.
Saka, kana iwe uchida kuedza bhuku uye ubatike pariri, heano mamwe mazita angave akakwana kuitira kuti usakwanise kuzvibvisa kubva pamapeji ebhuku kusvika wapedza (uye kana wadaro, inzwa. kusava nematuro ikoko kwatisiya ndaverenga nyaya yakanaka).
1 Ko mabhuku ane hoko iyoyo
2 Mienzaniso yemabhuku anokochekera
2.1 Chirwere chaunosiya, naCarlos Montero
2.2 The Midnight Library, naMat Haig
2.3 Hunyoro ndihwo husiku, naFrancis Scott Fitzgerald
2.4 A Cage of Gold, naCamila Läckberg
2.5 Moby Dick naHerman Melville
2.6 Kuzvikudza uye Kusarura, naJane Austen
2.7 Monologues yemukadzi, naEve Ensler
2.8 The Book of Illusions, rakanyorwa naPaul Auster
2.9 NaJohn Verdon, Usavhura Meso Ako
2.10 Baztán Trilogy, naDolores Redondo
Ko mabhuku ane hoko iyoyo
Tisati takupa mienzaniso yemabhuku anokochekera, tinoda kutarisa kuti sei usingakwanise kuaisa pasi. Chokwadi, bhuku rinopindwa muropa harisi pane imwe nyaya, inogona kuva imwe yezviitiko, zvakavanzika, rudo, kutya, muunganidzwa wenhetembo ... Chaizvo chinhu chakakosha uye chinoita kuti bhuku iroro riite kuti usadye, usarara uye usaite chimwe chinhu kunze kwekuvhura peji nepeji ndiyo nyaya yacho pachayo. .
Kana munyori achigona batai muverengi pakati pemazwi ayo, mitsara, ndima nemapeji nekuda kwenzira yekutaura nyaya uye kuronga kweizvi, Zvinonzi ibhuku rinokochekera.
Pane munhu anobatwa nazvo here? Hongu hongu, chokwadi ndechekuti hongu. Iwe unofanirwawo kuyeuka kuti havasi vese vaverengi vanozobatikana pamabhuku mamwe chete. Ichokwadi kuti kune mamwe mabhuku ane vaverengi vakapindwa muropa kupfuura mamwe, asi chokwadi ndechekuti pachagara paine mumwe munhu "achanwa" nhoroondo yebhuku.
Mienzaniso yemabhuku anokochekera
Next tichakupa akati wandei mienzaniso yemabhuku anokochekera uye kuti, paunotanga kuaverenga, pane imwe nguva yausingakwanise kumira uye haunetseke nekusadya kana kusarara kuti uzive kuti nyaya yacho ichapera sei.
Hongu, sezvatakambotaura, izvi zvinonyanya kuzviisa pasi, pachava nevanhu vanowana aya mabhuku apindwa muropa, uye vamwe vasingagoni kuabata ndokuguma vaasiya. Ndokusaka tichikupa mienzaniso yakawanda.
Chirwere chaunosiya, naCarlos Montero
Muchiitiko ichi tiri kutaura nezvenyaya yaRaquel, mudzidzisi wepachikoro chesekondari anotanga kushanda seanotsiva pachikoro chemumusha, kunyanya mune chemurume wake. Zvisinei, anozviziva munhu waari kutsiva akazviuraya uye anosarudza kuongorora kuti chii chaive chikonzero nei akazviitira.
The Midnight Library, naMat Haig
Iri nderimwe remabhuku aungave wakambonzwa zvishoma nezvawo uye zvakadaro rinokukochekera iwe zvakanyanya.
Mauri mune Nora Mbeu uyo, asingazive kuti sei, anopedzisira ave mune inonzi Midnight Library. Ikoko, vanomupa mukana wokurarama nenzira dzakasiyana-siyana, sokunge kuti akanga aita zvimwe zvisarudzo ndokuziva zvakanga zvaitika.
Asi dzimwe nguva shanduko idzodzo dzine mhedzisiro dzinogona kuisa hupenyu hwako panjodzi.
Pane mubvunzo unokosha zvikuru unopindurwa mubhuku rino: ndeipi nzira yakanakisisa yokurarama nayo?
Hunyoro ndihwo husiku, naFrancis Scott Fitzgerald
Husiku hwakapfava: 675 ...
Fungidzira murume nemudzimai vanobva kuUnited States vachisvika paFrench Riviera. Ndivo vepamusoro, kureva kuti vakapfuma. Vakatsvinda uye havaite sevari kuzvinyima chero chinhu. Asi chokwadi ndechekuti Vanovanza chakavanzika chavasingadi kuti chero munhu azive.
A Cage of Gold, naCamila Läckberg
Goridhe Cage: Iyo ...
Kune vanoda zvinyorwa zvehutsotsi, iyi ndeimwe yeanonyanya kushamisa aunogona kuverenga, kubvira protagonist anova "mutsivi" uye haangamiri kusvikira aita kuti munhu wose akamutadzira aripe.
Hongu, yekare. Uye kunyange kana makore akapfuura, richaramba riri rimwe remabhuku anobatikanisa zvikuru anofanira kurumbidzwa nokuda kwenzira yaanorondedzerwa nayo, uye mafambisirwo aanoitwa nawo. izvo zvinoda protagonist kubata whale, havasi vanyori vakawanda vanobudirira.
Kana iwe wakangoona bhaisikopo, pane zvakawanda mubhuku rawakapotsa, uye iwe uchaona kuti, mushure mekuiverenga, iwe uchaona kuti zvaive nani kuti watanga pakutanga.
Kune vateveri verudo, rimwe remabhuku anopindwa muropa ratinogona kukurudzira ndeiri, Kudada uye Kusarura. Mariri anotiendesa kune imwe nguva asi panguva imwechete anotipa a chiono chemukadzi mukuru kuti haadi kuzviisa pasi pezvinodiwa nenzanga kana kuti zvevanhu.
Monologues yemukadzi, naEve Ensler
Monologues yemukadzi ...
Nyaya iyi yakagadziridzwa kuita mutambo uye yakavakirwa, sekureva kunoita zita rayo, pakusangana kwevanhukadzi. Munyori akaita sei? Bvunzurudza vanopfuura 200 vakadzi vemarudzi akasiyana uye mazera kutaura, nenzira inonakidza uye inovaraidza, nyaya dzine chekuita nebonde uye bonde.
The Book of Illusions, rakanyorwa naPaul Auster
Bhuku reIllusions ...
Fungidzira kuti wakafirwa nemukadzi wako nemwana wako, hapana chawasara nacho muupenyu. Aya ndiwo manzwiro anoita protagonist webhuku, David Zimmer, uyo chete mushambadzi weterevhizheni ane mutambi wemabhaisikopo akanyarara Hector Mann anoita kuti unakidzwe nekunyora bhuku nezvake.
Saka, mukutsvaga kwake, anotanga kuunganidza mafirimu aakatora, zvinyorwa zvinoreva kwaari uye chakavanzika chinoramba chichikura uye chikuru. Kusvika pakuti mumwe mukadzi anongoerekana apinda mumba make akamunongedzera nepfuti.
NaJohn Verdon, Usavhura Meso Ako
Kune vateveri vezvakavanzika vasingakwanisi kuisa pasi bhuku kusvikira rapera, mukati Usazarura maziso ako une muenzaniso wakajeka webhuku rausingazoregi.
Mariri tine David Gurney se protagonist, murume anofungidzirwa kuti haakundiki, kusvikira Sangana nemhondi yakangwara yausina kumboona.
Ehe, ramba uchifunga kuti chikamu chechipiri, uye muchokwadi saga ndeye 7, saka ungangoda kutanga nekutanga, ndinoziva zvauri kufunga.
Baztán Trilogy, naDolores Redondo
Panyaya iyi, semabhuku anokukochekera, hatikurudziri imwe, asi matatu. Vose zvavo inogona kuverengwa yakazvimirira, kunyange zvazvo zviri nani kutanga neyokutanga.
Kana mafirimu (nokuti akashandurwa) akanga atove akanaka uye akabatanidzwa, munyaya yemabhuku tinogona kutaura kuti haungadi kuasunungura kusvikira apera.
Tinoziva sei izvozvo kune mamwe mabhuku akawanda anobata, Unogona here kutipa mimwe mienzaniso yeavo vawakaverenga uye vava kupindwa muropa kubva kwekutanga kusvika kwekupedzisira?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Mabhuku » Mabhuku anokochekera
Cecilia kleiman akadaro
Mhosva uye Kurangwa! Zvakakwana!
Pindura kuna Cecilia Kleiman
Mabhuku eKisimusi nenyaya. Sarudzo
José Hierro. Zuva rekufa kwake. Nhetembo